Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay abaaraha dalka ka jira – XAMAR POST
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay abaaraha dalka ka jira
By Mohamed Abdi On Mar 14, 2021
Guddiga gurmadka abaaraha ee xukuumadda Soomaaliya u xil saartay ka jawaabista xaaladaha abaaraha ayaa sheegay in ay heleen jawaabo wax ku ool ah oo ku aadan wax u qabashada dadka abaaraha.
Shir jaraa’id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabteen guddoomiyaha guddiga ahna wasiirka maaliyadda, wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gargaarka Soomaaliya ayay ku sheegeen in hey’ado iyo ururo kale oo caalamiga ah u soo jawaab ah qeyb qaadashada samatabixinta dadka abaaraha heystaan.
Khadiijo Maxamed Diiriye, wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa sheegtay 5.9 milyan oo Soomaali ah heysato dhibaatooyin ka dhashay isbedelka cimilada, abaaraha, fatahaadaha iyo duruufo kale.
Wasiir Beyle, ayaa carrabka ku adkeeyay in dadka Soomaaliyeed ay tahay in ay ayaga isku tashtaan isla markaana ka faa’ideystaan kheyraadka Alle ku maneystay ee dhulkooda yaala. Wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska, Cismaan Abokor Dubbe, ayaa warbaahinta ku booriyay in ay u istaagaan sidii wacyigelinta bulshada loo gaarsiin lahaa
BY: MOHAMED YAHYE JIINOW
Puntland: Jadwalka diiwaan-gelin cod-bixiyaasha oo la shaaciyay
Kenya oo Eedeyn Culus U Jeedisay Guddiga Maxkamadda ICJ.